खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? ठिक पार्न यी उपाय अपनाउनुहोस् – Khabaarpati
खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? ठिक पार्न यी उपाय अपनाउनुहोस्
November 5, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? ठिक पार्न यी उपाय अपनाउनुहोस्
गर्मी सकिएर विस्तारै चिसो मौसम शुरु हुँदैछ । चिसो समयमा खुट्टा फुट्ने तथा सुन्निने समस्याले अधिक सताउने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।चिसो समयमा नियमित रूपमा आफ्नो खुट्टामा कुनै क्रिम अथवा तेलले मसाज गर्नु राम्रो हुन्छ । हरेक दिन सुत्ने समयमा खुट्टामा सफा गरेर फूट क्रिम लगाउने र सुतीको कपडाले राम्रोसँग पुछेर सुत्ने गरेमा खुट्टा सुन्निने तथा फुट्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
पाकेको केरा प्रयोग गर्ने
पोकेको केरामा थोरै मात्रामा जैतुनको तेल मिसाएर हरेक रात फुटेको ठाउँमा लगाउने र १० देखि १५ मिनेटसम्म राखेर धोएमा यस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।हप्तामा एकपटक सुत्नुपूर्व कागतीको रस मनतातो पानीमा मिसाएर खुट्टालाई १५ मिनेटसम्म डुबाएर सफा गर्ने र कुनै क्रिम लगाएर पनि राख्न सकिन्छ।
ग्लिसरिन तथा गुलाब जल
दैनिक रूपमा आफ्नो खुट्टालाई सफा गरेर ग्लिसरिन र गुलाबजलको मिश्रण खुट्टामा लगाउँदा खुट्टा फुटेको तथा चिसोले सुन्निएको निको हुन्छ र बच्न सकिन्छ ।
मनतातो पानीमा नुन
दुखिरहेको खुट्टालाई आराम दिन पानीमा दुई चम्चा नून हालेर १५ देखि २० मिनेटसम्म आफ्नो खुट्टालाई सेक्न सकिन्छ।यसले खुट्टालाई आराम दिन्छ । पछि कुनै क्रिम या तेल लगाएर केही मालिस गर्दा फुटेका घाउहरू ठीक हुन्छन्।
यो फोटोमा उत्कृष्ट क्याप्सन लेख्नुहोस् र गाडी उपहार जित्नुहोस
घरबाट ६० लाख लुटेपछि चोरले लिपिस्टिकले लेखे- ‘भाउजु निकै राम्री हुनुहुन्छ’
अमेरिकामा हालसालै एउटा यस्तो आश्चर्यलाग्दो घटना : एण्टिबायोटिक औषधिको साइड इफेक्टले महिलाको जिब्रोमा दिखेयो यस्तो चिज (भिडियो सहित)
January 4, 2021 January 4, 2021 goodmam
May 16, 2021 goodmam
सिमानामा चिनियाँ सैनिकविरुद्ध लड्न भारतीय सैनिकलाई करेन्टवाला त्रिशूल (भिडियोसहित) October 19, 2021
आमासँग फोनमा बोल्दाबोल्दै दुर्घटनामा परेर मञ्जुले प्राण त्यागिन्, दुई दिनअघि बनाएको त्यो टिकटक भिडियो October 19, 2021
जेलमा हजारौं कैदीहरुसँग बस्छन् आर्यन खान: भन्छन्, बाहिर निस्किएपछि असल मान्छे बनेर देखाउँछु October 19, 2021
१ बोतलको मूल्य ७२ लाख, यो हो संसारको सबैभन्दा महंगो पानी October 19, 2021
३० वर्षसम्म ढोका अड्काउन प्रयोग गरेको ढुङ्गाको अस्लियत थाहा पाउदा सबै चकित October 19, 2021